« Jesosy dia naka an’i Petera sy Jakoba sy Jaona rahalahiny ka nitondra azy niakatra tany an-tendrombohitra mba hitokana» (Matio 17:1)
Manana ny toerana lehibe ny tendrombohitra, eo amin’izao tontolo izao. Betsaka ny olona na dia hitsangatsangana fotsiny aza, dia roso mandeha, indrindra moa ireo mpanao fanatanjaha-tena sy ireo mpizaha-tany, dia liana dia liana tokoa ny amin’ny fiakarana eny an-tendrombohitra. Ireo tendrombohitra avo dia manana ny lazany sy ny tantarany hatrany, ary tahaka ny vavolombelon’ny zava-misy sy ny zava-mitranga eo amin’ny fiaraha-monina na ny firenena iray mihitsy.
Ohatra iray amin’izany, raha tsy hiresaka afa-tsy ny eto afovoan-tany isika, dia ny any Ankaratra. Fomba fiteny matetika ny hoe: “Ny maso any Ankaratra”, entina ilazàna fa misarika ny maso sy ny eritreritra ny tendrombohitr’Ankaratra. Tsy ny maso sy ny saina na ny tena ihany anefa no tahaka ny voasinton’ny tendrombohitra, fa na ny fanahy koa aza. Ohatra amin’izany ny tantaran’ny tendrombohitra roa ambin’ny folo teto Imerina, izay manana ny hasiny sy ny maha-izy azy. N’aiza n’aiza, eto amin’izao tontolo izao, ny tendrombohitra dia noheverina fa toerana misy an’Andriamanitra. Hanome ohatra isika, ny tendrombohitr’i Olympe ohatra any Grece (nihavian’ny Lalao olimpika), ny tendrombohitr’i Fuji-Yama any Japon, ny Machu Picchu any Pérou.
Ao amin’ny Baiboly, ny tendrombohitra dia toerana manokana hihaonana amion’Andriamanitra. Noho izy toerana avo, dia noheverina fa manakaiky kokoa an’Andriamanitra ny fiakarana any, satria Andriamanitra dia avo. Eto ambonin’ny tany, dia tsy misy fivavahana, na dia iray aza, manompo Andriamanitra any ambanin’ny tany, any amin’ny fara-vodi-lavaka any, fa tsy maintsy mametraka ny toerany amin’ny ambony hatrany.
Amin’ireo karazam-pivavahana rehetra ary, ny fivavahana kristiana no mametraka an’Andriamanitra tokana ho “avo indrindra”, “ambonin’ny andriamanitra rehetra”.
Hatramin’ny Testamenta taloha ary, dia efa hitantsika ny hasarobidin’ny tendrombohitra. Lasa toerana fihaonana amin’Andriamanitra sy toeram-pivavahana mihitsy aza. Ohatra, tany an-tendrombohitr’i Horeba, any Sinay, no nihaonan’i Mosesy tamin’Andriamanitra voalohany. Niseho tamin’ny alalan’ny afo tsy hita maso Jehovah, izay nandrehitra ny roimemy nefa tsy levona (Eksodosy 3 sy 4). Tany no nitenenan’Andriamanitra taminy sy nahazoany baiko andeha hanafaka ny zanak’isiraely ihany koa.
Tahaka izany koa i Elia, dia niakatra tany an-tendrombohitra, mba hihaona manokana amin’i Jehovah (1 Mpanjaka 18 sy 19).
Aty amin’ny Testamenta vaovao, dia voalaza fa tany an-tendrombohitra Jesosy no nanohitra ny fakam-panahy izay nataon’i Satàna Azy (Matio 4:8), tany ihany koa izy no nampianatra ny vahoaka hanaraka ny Lalàna vaovao na ny didy vaovao (Matio 5), teo koa ny fiovan-tarehy, ary tany an-tendrombohitra ihany koa ny Tompo no nibaiko ny mpianatra hitory Filazantsara manerana an’izao tontolo izao.
Noho izany, zava-dehibe loatra ny fametrahan’ny Baiboly ny toeran’ny tendrombohitra ka mendrika hojerena akaiky.
Eto amin’ny Matio 17:41 eto ary, dia nitondra an’i Jakoba sy Jaona ary Petera Jesosy hiakatra any an-tendrombohitra hitokana. Jesosy dia efa nanana izany fahazarana mankany an-tendrombohitra izany, mba hitokam-bavaka. Ny olona, amin’ny alina dia matory, fa ny Tompo kosa dia. Mampiseho ny santionanany amin’izany ny Marka 6:48, izay milaza fa “rehefa nanao veloma ny olona Jesosy, dia lasa nankany an-tendrombohitra hivavaka”.
Ry Havana malala, tarihin’ny Tompo tahaka izany koa isika, izay tsy hafa fa mpianany, handeha ho any an-tendrombohitra mba hivavaka. Tsy ny mpianatra rehetra anefa, fa ireo izay mazoto sy resy lahatra ny amin’izany ihany. Ny Tompo dia nifidy an’izy telo lahy, izay isan’ny nafana fo indrindra tao amin’ny mpianany sady nanana fitiavana Azy ihany koa.
Ny lesona voalohany amin’izany ry Havana malala, raha manana fitiavana sy hafanam-po mirehitra ho an’ny Tompo isika, dia Izy mihitsy no mitarika antsika mbola handroso bebe kokoa. Izay manana, hoy Jesosy, dia mbola hanana ihany, fa ny tsy manana kosa na dia ny kely ananany aza esorina aminy. Mazàna amin’ny resaka vola na fananana no ampiharan’ny olona izany, fa ny Tompo kosa anefa dia tena mihevitra ny ara-panahy. Izay manana finoana, na dia toa ny voan-tsinapy aza, dia hahafindra tendrombohitra, izany hoe ny Tompo mihitsy no hanampy sy hanosika ary hitarika azy bebe kokoa, hahitany voninahitr’Andriamanitra. Koa tianao ary ve ny hitarihan’ny Tompo anao hiroso bebe kokoa ka hahita zava-mahagaga amin’ny fiainanao? Tiavo Jesosy ary manompoa Azy amim-pitiavana sy ami-pifaliana ary amin-kafanam-po, dia ho hitanao ny voninahitr’Andriamanitra.
Ny zava-dehibe faharoa, Jesosy dia mametraka ny antony hiakarana any an-tendrombohitra ary manazava izany. Ny voambolana ampiasainy eto dia ny hoe “hitokana”, izay tsy hafa fa “fitokanam-bavaka”. Mila an’izany isika eo amin’ny fiainan-panahintsika, satria “maro ny mifamoivoy, ka tsy hisy hihinana aza”. Ny fanahy mangetaheta an’Andriamanitra dia mila fitoniana, filaminana ary toerana mangina. Anjarantsika ny mba mifidy toerana sy fotoana anaovana izany eo amin’ny fiainana.
Farany, inona no vokatra azon’ny mpianatra raha niakatra tany an-tendrombohitra biaraka tamin’i Jesosy? Mazava ho azy, fa ny fiovan-tarehin’i Jesosy, sy ny ny zava-miafin’ireo olon’Andriamanitra izay efa maty ela taloha. Raha manaiky isika hotarihin’i Jesosy amin’ny fitokanam-bavaka, dia hahita an’Andriamanitra isika, ary hahita ny voninahitr’i Jesosy marina. Hahita ny voninahitr’Andriamanitra ny olona mangetaheta Azy, dia ny voninahiny mamirapiratra. Ary tsy vitan’izany fa hampahafantarain’i Jesosy koa izy ny voninahitr’izay miaraka amin’Andriamanitra marina, tahaka an’i Mosesy sy Elia.
Noho izany ary ry Havana malala, mba hikolokoloana ny fianam-panahintsika, indrindra mba hirosoantsika bebe kokoa, mifidiana fotoana sy toerana mba hjivavahana mitokana, hahitantsika ny voninahitr’Andriamanitra. Tsy mahita ny voninahitr’Andriamanitra ny ankabeazan’ny kristiana satria variana any an-dohasaha, izay tsy hafa fa toerana hiadiana amin’ny devoly sy ny adi-hevitra ary any adim-piainana ihany koa. Mba mihataka kely e, hahasoa sy hahatsara antsika.
Izany indrindra no hamonjena TOBY eo amintsika Fifohazana. Saingy, tena mitokana hivavaka ve isika aty amin’ny Toby? Ary raha anontaniana ny mpino rehefa avy namonjy Toby, tena nahita ny voninahitr’Andriamanitra marina ve? Dia ahoana no avalintsika rehefa avy eo, mba manana zavatra ijoroana vavolombelona ve isika? Eritrereto izany dia mahereza!